Kitra – «Can 2019»: tsy azo alefa amin’ny «écran géant» ireo lalao 52 | NewsMada
Nambaran’ny tale jeneralin’ny ORTM, nandritra ny fivahiniany tao amin’ny fahitalavi-pirenena (TVM), fa ny onjam-peom-pirenena (RNM) sy ny TVM irery ihany ny hany afaka mampita mivantana, ireo lalao 52 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), taranja baolina kitra, hatao any Egypta, ny 21 jona ka hatramin’ny 19 jolay, ho avy izao.
Araka ny fepetra napetraky ny Caf sy ny UAR, tompon’ny zo rehetra amin’ity lalao ity, dia tsy misy mahazo manao fampitana ireo sary sy feo ireo ankalamanjana «écran géant», eto Madagasikara. Voarara tanteraka koa ny fampiasana ireo sary ireo, hanaovana hetsika ara-barotra ankalamanjana. Nomarihiny fa efa nahazo ny alalana avy amin’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf), ny TVM sy ny RNM. Ankoatra izay, nanapa-kevitra ny fahitalavi-pirenena, fa ny feo sy ny fitantarana amin’ny teny frantsay no hampitaina fa tsy hisy ny hanao izany fitantarana izany amin’ny Teny malagasy.
Noho izany, tsy misy haino aman-jery hafa afaka mandefa na mitantara ireo lalao 52 ireo, na koa handray ny sarin’ny TVM sy ny feo avy amin’ny RNM. Ho an’ireo izay mandray sary avy amin’ny “sattelites” koa dia tsy ho afaka hahita ny «Can 2019”, izy ireo rehefa mandeha ny lalao fa ho tapaka avy hatrany, izany. Izao fepetra izao, dia ho fanajana ny fifanarahana teo amin’ny Caf sy ny ORTM, izay nividy ny sary sy ny feo.